(1) Fomba isan-karazany & vidin'ny orinasa mirary.
(2) valiny avo lenta sy haingana ao anatin'ny 24 ora.
(3) 15 taona mahery ny fanamboarana traikefa.
Ny vidin-tsika dia azo ovaina arakaraka ny famatsiana sy ny tsena hafa. Handefa anao ny lisitry ny vidiny nohavaozina rehefa avy nifandray taminay ianao raha mila fanazavana fanampiny, na lazao anay ny maodelin'ny vokatra tianao, dia halefanay ny teny nalaina.
3.Manana fatra fatra farafahakeliny ve ianao? Azoko afangaro ve ny loko?
Eny, takianay ny kaomandy iraisam-pirenena rehetra mba hanana fatra farafahakeliny mitaky farafahakeliny. Raha mitady hamidy indray ianao nefa amin'ny habetsaky ny kely dia kely, mamporisika anao izahay hijery ny tranokalanay.
Ny loko sy ny style mix dia mety ho antsika.
Mandra-pahoviana ny santionanao na ny fotoana famokarana?
Ohatra: 3-7 andro aorian'ny nanamafisana ny zava-drehetra.
Famokarana betsaka: 7-30 andro, miankina amin'ny famolavolana.
Ny fotoana fitarihana dia nanjary nahomby rehefa (1) nahazo ny petra-bolanao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao izahay. Raha tsy mandeha amin'ny fe-potoana farany ny fotoananay dia alefaso azafady amin'ny alàlan'ny varotrao. Amin'ny tranga rehetra dia hiezaka izahay hanome izay ilainao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
Ahoana ny amin'ny fifehezana kalitao?
Ny vokatra rehetra dia hojerena amin'ny fomba hentitra ary maka ny iray amin'ireo vokatra alefanay ho fankatoavana alohan'ny fandefasana. Aorian'ny fanekenao sy alefanao ny fandefasana, dia mamoaka ny entana izahay.
Eny. Afaka manome ny ankamaroan'ny antontan-taratasy izahay, ao anatin'izany ny Certificat de analysis / Conformance, Insurance, Origin, ary antontan-taratasy fanondranana hafa raha ilaina izany.
Afaka mitsidika ny orinasa misy anao ve izahay?
Miarahaba anao am-pitiavana izahay hitsidika ny orinasanay amin'ny fotoana rehetra.
Azonao atao ny mandoa ny fandoavam-bola amin'ny kaonty banky anay: petra-bola 30% mialoha, fifandanjana 70% amin'ny kopian'ny B / L.
Izahay dia manome antoka ny fitaovanay sy ny fahaizanay miasa. Ny fanoloran-tenanay dia ny fahafaham-ponao amin'ny vokatra. Amin'ny fiantohana na tsia, kolontsain'ny orinasanay ny miresaka sy hamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra hahitan'ny tsirairay fahafaham-po.
Ahoana no ahafahako manafatra?
(1) Raha te-hanafatra kaomandy mivantana ianao dia afaka mandeha any amin'ny magazay alibaba anay: https://znsfashion.en.alibaba.com/
(2) Tongasoa eto amintsika handefa anay mailaka na hamela hafatra hifandray aminay mba hanafatra betsaka.